ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက ဂူတာရက်စ်အား အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒုတိယသက်တမ်းအတွက် ထောက်ခံ အတည်ပြု - Xinhua News Agency
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဂူတာရက်စ် အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်က ပြုလုပ်သော အထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးတစ်ခုတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကုလသမဂ္ဂ ၊ ဇွန် ၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်အား အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရာထူး ဒုတိယသက်တမ်းအတွက် ဇွန် ၈ ရက်တွင် ထောက်ခံအတည်ပြုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။လုံခြုံရေးကောင်စီ တံခါးပိတ်အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပပြုလုပ်ပြီးနောက် အဆိုပါ ထောက်ခံအတည်ပြုချက်ကို ဇွန်လအတွက် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ အလှည့်ကျဥက္ကဌြဖစ်သူ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အက်စ်တိုးနီးယားသံအမတ်ကြီး Sven Jurgenson ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက ဂူတာရက်စ်အား ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရာထူး ဒုတိယသက်တမ်းအတွက် ထောက်ခံပေးခဲ့ရာ ယင်းသက်တမ်းမှာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် စတင်အသက်ဝင်မည်ဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအနေဖြင့် ဂူတာရက်စ်အား တရားဝင်ခန့်အပ်ခြင်း အစည်းအဝေးတစ်ခုကို ဇွန် ၁၈ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားရန် ရှိကြောင်း Jurgenson ကဖြည့်စွက် ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုသို့ ဒုတိယသက်တမ်းအတွက် ထပ်မံရွေးချယ် ခန့်အပ်ခံရခြင်းအပေါ် လုံခြုံရေးကောင်စီအား ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ဂူတာရက်စ်က အင်္ဂါနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ဒီနေ့မှာ ကျွန်တော့်ကို ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရာထူး ဒုတိယသက်တမ်းထမ်းဆောင်ခွင့်ရရှိအောင် အထွေထွေညီလာခံဆီ ထောက်ခံပေးခဲ့တဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် သိပ်ကိုဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ် ၊ ကျွန်တော့်ကို ယုံကြည်မှုပေးခဲ့တဲ့အတွက် လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကို သိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၊ ဒါ့အပြင် ကျွန်တော့်ကို နောက်တစ်ကြိမ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ မိခင်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဂူတာရက်စ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ရှုပ်ထွေးနက်နဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုများစွာ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်မှာ နောက်ထပ် အချိန် လေးနှစ်ခွဲကြာ ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးမှာ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေအတွက် အကူအညီပေးဖို့ နဲ့ ‘ ကျွန်ုပ်တို့ ၊ လူသားတွေ’ အတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ အခွင့်အရေးရတာဟာ မဟာအခွင့်အရေးပါပဲ” ဟု ဂူတာရက်စ်က ဆိုသည်။
“ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ(UN)ရဲ့ ပဋိညာဉ်နဲ့စည်းမျဉ်းတွေကို လေးစားလိုက်နာဖို့ဟာ အကြီးမားဆုံးတာဝန်ဝတ္တရားတစ်ခုပါပဲ ။ အကယ်၍ အထွေထွေညီလာခံက ကျွန်တော့်ကို ယုံကြည်စွာနဲ့ အပ်နှင်းလားမယ်ဆိုရင် တာဝန်ယူမှုအပြည့်နဲ့အတူ ဒုတိယ သက်တမ်း အခွင့်အာဏာကို ကျိုးကျိုးနွံနွံထမ်းရွက်သွားမှာပါ ” ဟု၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
UN Security Council endorses Secretary-General Guterres for second term,
UNITED NATIONS, June 8 (Xinhua) — The UN Security Council on Tuesday endorsed Secretary-General Antonio Guterres forasecond term.
The Security Council recommends that the UN General Assembly appoint Guterres forasecond five-year term beginning Jan. 1, 2022.
Jurgenson said the General Assembly is likely to holdasession on Guterres’ appointment on June 18.
UNITED NATIONS, June 8 (Xinhua) — UN Secretary-General Antonio Guterres on Tuesday thanked the Security Council for endorsing him forasecond term of office.
United Nations Secretary-General Antonio Guterres addressesavirtual global roundtable on transforming extractive industries for sustainable development at the UN headquarters in New York, on May 25, 2021. (Mark Garten/UN Photo/Handout via Xinhua)